NVC လက်ခံသင့် /လက်မခံသင့် ? မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူအဖွဲ့အစည်းမှ တုံပြန်မှုများ (၁) - News @ M-Media
NVC လက်ခံသင့် /လက်မခံသင့် ? မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူအဖွဲ့အစည်းမှ တုံပြန်မှုများ (၁)
in မြန်မာသတင်း — December 26, 2016
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ၊၂၀၁၆
နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား Identity Card for National Verification (NV Card) ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အများဆုံးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အကြား အမြင်တွေကို သိရအောင် မြန်မာမွတ်စလင်မ် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်များ၊ ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
အလ်ဟာဂ်ျ ဦးအေးလွင် (အစ္စလာမ့် ဓမ္မဗိမာန် ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး)
NVC ဆိုတာ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအတွင်းမှာ အထောက်အထားလုံးဝမရှိတဲ့သူတွေအတွက် ပေးထားတာ။။ အဲ့ဒါသည် နိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးက မွေးဖွားသူများနှင့် ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်တဲ့ အထောက်အထား စာရွက်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အထဲမှာ မနတ လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား ကိုင်ထားတဲ့ လူများလည်း အဲ့ဒီ NVC ကိုလုံးဝ ထုတ်ယူစရာ မလိုဘူး။ တိုက်ရိုက်နိုင်ငံသားကို လျှောက်လို့ရတယ်။ ဒါ ဥပဒေအရ ဒီအတိုင်းပဲ ရှိတယ်။ NVC ဆိုသည်မှာ အထောက်အထားမရှိသော နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို စစ်ဆေးဖို့ ခံယူဖို့ လိုအပ်တဲ့သူတွေကို ပေးရတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီးများအတွက်က လုံးဝ လုံးဝ NVC ဆိုတာ ကိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ဥပဒေအရ သိထားပါတယ်။
အလ်ဟဂ်ျ ဦးတင်မောင်သန်း (အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ဌာနချူပ် ၊ အတွင်းရေးမှူးချူပ်)
NVC ကတ်ကို လုံးဝ (လုံးဝ) လက်မခံပါ။ လောလောဆယ် လက်မခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝ ယတိပြတ်ကို လက်မခံတာပါ။ ဒီလက်မခံတဲ့ အကြောင်းကို အထက်အဆင့်ဆင့် ကို ဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်။
NVကတ်ထုတ်ပေး ရန်လည်း မလို။ NV ကတ် လက္ခံရန်လည်း အကြောင်း မရှိ။
(၃) နိုင်-ပြု သာထုတ်ပေးရမယ်။
ခလီဖွာ ဦးသိန်းဝင်းအောင် (K.A.F.T.G ဃရာနာ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်)
NVC ကတ်ဆိုတာ နိုင်ငံသား ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး သံသယဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလာတာ နှစ်ပေါင်း များစွာဆိုတော့ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီဟာကို ယူစရာလိုကို မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်အချိန်ထိ ဆက်သံသယဖြစ်နေဦးမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားဟုတ်တယ်ဆိုတာက ဘာမှသံသယဖြစ်စရာမလိုဘူး။ ဒီဟာက ခွဲခြားမှုတစ်ခုပဲလို့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်တယ်။ မိုးပွင့်ဆိုပြီးတော့ သူတို့လာလုပ်ကြတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ မွတ်စလင်ကလေးဆိုရင် တခြားမှာလုပ်ပါဆိုပြီး ကလေးတွေကစပြီး ခွဲခြားနေတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို အဖြူကတ်ပေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း အဖြူကတ်ယူမယ်။ ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးမှ လုပ်တယ်ဆိုတာ ဥပဒေမှာလည်း မပါဘူး။ ဥပဒေမှာလည်း မရှိဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလည်း မရှိဘူး။ ဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီး ကတ်ကိုခွဲခြားပေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရှိတယ်။
(၁)White card ကိုင်ဆောင်သူများကိုသာ NVC နဲ့ လဲပေးဖို့ ယခင်သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်က ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
(၂)NLDရဲ့policyက ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ၁၉၈၂နိုင်ငံသား ဥပဒေနဲ့ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
(၃)နိုင်ငံသားမိဘ နှစ်ပါးက မွေးဖွားသူသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
(၄)အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား(သုံးခေါက်ချိုး) ကိုင်ဆောင်သူများကို NVC Cardနဲ့ လဲလှယ် ပေးရန် မလိုကြောင်း လဝကဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
(၅) White card ကို ရုပ်သိမ်းသကဲ့သို့ NVC ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ သက်တမ်းစေ့ရင် နောက်ထပ် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် အရောင် တစ်မျိုးနဲ့ ထပ်လဲနိုင်ပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေကို ကိုးကားထားပါတယ်။
(၆) မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများအပြားသည် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ NVC ကတ် ကိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အလ်ဟဂ်ျဦးမြင့်ထွန်း (မြန်မာမွတ်စလင် လူငယ်များ(ဘာသာရေး) အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ)
NVC ကတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောရရင် လက်ရှိ ၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအပေါ်မှာ ကျင့်သုံးစေချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် အရင်က white card ဆိုပြီး တစ်ခါထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့white card ကိုင်တဲ့လူတွေကို နိုင်ငံခြားသား၊ ခိုးဝင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ခြင်းကို ခံရတယ်။ အဲ့ဒီရဲ့ အကျိုးဆက် တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တော်တော် များများ တိုက်ခိုက်တာတို့ တခြားပြသာနာတွေ မျိုးစုံ ဖြေရှင်းခဲ့ရတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံသားရှိတဲ့ ပြု ဧည့် နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ ကတ်သုံးကတ်မှာ သူထိုက်တန်တဲ့ဟာ ကိုပဲ စစ်ဆေးပြီး ပေးသင့်တာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ NVC ကတ်ဟာ နောက်ထပ် ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်လာမှာလို့ မြင်တယ်။ ထုတ်ပေးနေတာတွေကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။
NVC ကတ်ဆိုတာကို လုံးဝလက်မခံသင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဥပဒေမှာမှ မပါပါဘူး ၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေမှာတောင် မပါတဲ့အတွက် ဒါဟာမလိုအပ်ပဲနဲ့ လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီကတ်တွေ ထုတ်ပေးနေတာကတော့ မှားနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းမှာနေတယ်။ ဥပဒေနဲ့ လုံးဝမညီဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
NVC ကတ်ဆိုတာကို လုံးဝ လက်မခံပါနဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီကတ်ရဲ့ သက်တမ်းက သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ခွဲခြားဖို့ အတွက် ထုတ်ပေးတဲ့ကတ်လို့ပဲ ကျွန်တော် သံသယရှိတယ်။ဒါကြောင့် လုံးဝ လက်မခံပါနဲ့။
NVC ဆိုတဲ့ကတ်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီးတော့ ထုတ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ သူက အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်လည်း မရှိဘူး။ ဒီကတ်တွေက ဘယ်အထိ အကျိုးဝင်လည်းဆိုတာ မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါတွေက ပြည်သူတွေကြားမှာက နိုင်ငံသားမဖြစ်တဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ အခု ဒီ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အငြင်းပွားနေတာကစလုိ့ပေါ့၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ဆိုရင် နိုင်ငံသားလျှောက်ထားမှု ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေက ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကြားမှာ မတူတဲ့ ဘာသာဝင်တွေကြားမှာ ခွဲခြားပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသား အမျိုးအစားဆိုတာ ပထမတန်းစား၊ ဒုတိယ တန်းစား ဒီလိုမျိုးတွေ ခွဲမနေသင့်ဘူး။ ပြည်သူတွေ တန်းတူညီမျှအကုန်လုံး ဖြစ်ရမယ်။ လူမျိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ တခြားကြိုက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို စီစစ်ပါ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ ခွဲခြားပြီး ထုတ်ပေးတာ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
NVC ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စ လ.ဝ.က နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့မှု အစ္စလာမ်အဖွဲ့ကြီးမှ သတင်းထုတ်ပြန်
NVC ကိစ္စ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းအချို့ သဘောထားထုတ်ပြန်
NVC နဲ့ ပုဒ်မ-၆၅ ဆက်စပ်လာရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားလိမ့်မယ်